ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ အေးချမ်းတဲ့မြို့လေး Chiang Rai * ချင်းရိုင် * ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ရဲ့ Instagram Spot များ 🇹🇭📸⛰ •••••••••••••••••••••••••••••••• – YANGON STYLE
ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ အေးချမ်းတဲ့မြို့လေး Chiang Rai * ချင်းရိုင် * ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ရဲ့ Instagram Spot များ 🇹🇭📸⛰ ••••••••••••••••••••••••••••••••
ထိုင်းနိုင်ငံလဲသွားချင်တယ် Bangkok လိုဆူပူတဲ့နေရာမျိုးလဲ မသွားချင်ဘူးဆိုတော့ ဘယ်သွားကြမလဲလို့ စဉ်းစားနေပြီဆို ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ Chiang Rai မြို့လေးကိုသတိရလိုက်ပါနော် ☺️
ချင်းရိုင်မြို့ဆိုတာ ထိုင်းနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းရဲ့အနုပညာဗိသုကာလက်ရာတွေ စိမ်းစိုအုပ်မှိုင်းနေတဲ့ တောင်တန်းတွေဝန်းရံထားတဲ့ မြို့လေးပေါ့ 🇹🇭 Instagram Spot ဆိုတဲ့အတိုင်း နေရာတိုင်းက ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်စရာနေရာတွေကြီးပဲလေ 😍
ကဲ ဒါဆို ပထမဆုံး ချင်းရိုင်ကို ဘယ်လိုလမ်းကြောင်းတွေနဲ့ သွားလို့ရလဲ အရင်ဆုံး ပြောပြပေးမယ်နော် ☺️
သွားမယ်ဆိုအရင်ဆုံး maps.me offline app လေးကို download ဆွဲလိုက်ပါ။ ပြီးရင် Thailand map ကို ထပ်ပြီး Download ဆွဲလိုက်ပါ။ အရမ်းအဆင်ပြေတဲ့ Map လေးတစ်ခုပါ🤗
ထိုင်းနိုင်ငံရောက်ရင် Sin Card တော့ဝယ်ရမှာပေါ့နော် တစ်ကဒ်မှ ဘက် ၄၀ ပဲရှိပါတယ်။ facebook, Viber ၁ လ freeသုံးလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့နိုင်ငံက အရမ်းစည်းကမ်းရှိကြတယ်၊Foreigner တွေဆို Passport မပါရင် Sincard မရောင်းပါဘူး။အဲ့ဒါလေးတော့ သတိထားဖို့လိုပါတယ်။
🇹🇭 Chiang Rai ကိုဘယ်လိုသွားလို့ရနိုင်လဲ
Chiang Rai ကိုသွားမယ်ဆို Bangkok ကနေသွားလို့ရပါတယ်။ Passport လေးကိုင် လေယာဉ်လက်မှတ်လေးဝယ် အိုကေပီလေ။ အသွားအပြန် လက်မှတ်ကိုမှ149$ လောက်ပဲပေးရတယ် 😉 Bangkok ကနေ ကားစီးမလား? ရထားစီးမလား အဆင်ပြေတာနဲ့ သွားလို့ရပါတယ် … ကားခက Baht 1000 လောက်တော့ပေးရတယ်
ချင်းမိုင်ကို လေယာဉ်တဲ့ သွားပီး ချင်းရိုင်ကို ကားနဲ့ သွားလို့လဲရတယ် ၃ နာရီလောက်ပဲ ကားစီးရပါတယ်….
ဒါမှမဟုတ် Passport မရှိလို့ ဘလိုသွားရမလဲ ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် တာချီလိတ်ဘက်ကနေလဲ သွားလို့ရတယ်နော် 😄 ရန်ကုန် – တာချီလိတ် ကားစီးရင်တော့ ၂ ညအိပ် ၃ ရက်စီးရပြီး လမ်းမှာတင် အချိန်ကုန်သွားလိမ့်မယ် 😬 ရန်ကုန် – တာချီလိတ် လေယာဉ်လက်မှတ်ဆို တစ်ကြောင်းထဲကို ၁၀၅၀ဝ၀ လောက်ပေးရတယ်။ တာချီလိတ်ရောက်ပြီဆို မဲဆိုင်ဘက်ကမ်းကို ကူးဖို့အတွက် Immigrationမှာ Visa လျှောက်ရပါတယ်။ ချင်းရိုင်ကို တစ်ရက်လည်မယ်ဆို တစ်ယောက်ကို ဘက် ၃၀ဝ ပေးရပါတယ်။ ချင်းမိုင်ထိဆိုရင် တစ်ယောက်ကို ဘက် ၁၅၀ဝ…တစ်ပတ်နေလို့ရတယ်🤗 ကဲ ချင်းရိုင်သွားလို့ရပီလေ။
သဒ္ဓါတို့ကတော့ ၃ယောက်သွားတာမလို့ တစ်နေကုန်လည်တာကို ကားတစ်စီးငှားလိုက်ပါတယ်။ Guide ကလဲ ထိုင်းစကားကော မြန်မာစကားကော ပြောတတ်တော့ တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်။ တစ်နေကုန်လျှောက်လည်တာကို ဘက် ၂၅၀ဝ ပါ ကားအကောင်းစားကြီးနဲ့ အေးဆေးနဲ့ သက်သောင့်သက်သာဖြစ်တာပေါ့။ ဆိုင်ကယ်၊ တုတ်တုတ် (၃ဘီး) တို့နဲ့လဲလည်လို့ရသေးတယ်နော်။ ဈေးသက်သာပါတယ်။
🇹🇭 ချင်းရိုင်မြို့မှာ ဘယ်တွေလည်ကြမလဲ
လည်စရာကြီးကြီးမားမား ၆ နေရာ ၇ နေရာလောက်ရှိပါတယ်။ အကုန်လုံးကို တစ်ရက်ထဲနဲ့လည်လို့မလောက်ပါဘူး။ ဓာတ်ပုံကလဲရိုက်ချင်သေးတယ်လေ 😁 အကုန်လုံးကို တောင်တစ်နေရာ မြောက်တစ်နေရာကြီးပဲ 😂 အဲ့တော့ အဝေးဆုံးနေရာကနေ စလည်ပါတယ်။ အဝေးဆုံးက White Temple ပါ
White Temple ထဲမဝင်ခင်
နေရာတိုင်းက အဖြူရောင်တွေနဲ့ သိပ်လှတာပဲ
Golden toilet ပါနော် 🤣ဘာမှတ်နေလဲ Toilet ရှေ့ရောက်ရင် ဓာတ်ဖမ်းပစ်
မိသဒ္ဓါတို့က ထိုင်းမှာ လာ Ro နေတာနော်
🇹🇭 White Temple (Wat Rong Khun)
Chiang Rai ရောက်ရင် မသွားမဖြစ်နေရာကတော့ ဘုရားဖြူ Whit Temple ပါ။ အနုပညာဗိသုကာလက်ရာတွေအပြည့်နဲ့ ခမ်းနားထည်ဝါစွာ ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ အထင်ကရ Temple ကြီးတစ်ခုပါ။ White Temple ဆိုတဲ့အတိုင်း ကျောင်းကြီးတစ်ခုလုံးကို အဖြူရောင်တစ်ခုတည်းသာ ခြယ်မှုန်းထားပါတယ်။
Temple မှာရှိတဲ့ လက်ရာတစ်ခုချင်းစီကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင်င့် ဘယ်လောက်ထိ အနုစိတ်ဖန်တီးထားလဲ တွေ့မြင်နိုင်မှာပါ။ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ Famous Artist တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Chaleemchai Kositpipat ဆိုသူရဲ့ အနူပညာလက်ရာတွေလို့ပြောပါတယ်။
သူ့ထဲဝင်မယ်ဆို ဝင်ကြေးက တစ်ယောက်ကို ဘက် ၅၀ ပါ။ တန်ပါတယ် ဓာတ်ပုံပတ်ရိုက်တာနဲ့ 😁 တစ်နေရာနဲ့ တစ်နေရာ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို လူရှင်းအောင် တော်တော်စောင့်ရပါတယ်။ နေကလဲအရမ်းပူ 😑 သဘောကျတာတစ်ခုက Temple နားကအဆောင်မှာ Post card ပုံးလေးတွေနဲ့ ဘောပင်တွေထားထားပါတယ်။ Name, Date & Birth Date ရေးပီး White Temple တံဆိပ်တုံးလေးထုပြီး အမှတ်တရ ယူသွားလို့ရပါတယ်။ ပိုက်ဆံမပေးရပါဘူး 😍😍
ပြီးတော့ ခေါင်းလောင်းလေးတွေမှာ ကိုယ့်နာမည်ထိုးပြီး ချိတ်ဆွဲထားလို့ရပါတယ်။ တစ်ခုကို ဘက် ၅၀ပါပဲ။ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား ဧည့်သည်တွေ ချိတ်ဆွဲခဲ့တာတွေအများကြီးကို မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။
Whit temple ဘေးမှာ
ထီးအဖြူလေးနဲ့ အယ့်လယ့် နေအရမ်းပူတော့ မခံနိုင်တော့ဘူးလေ
ဘေးက အကုန်ဖြူနေတော့ လူက မဲသထက်မဲပေါ့
Post card လေး အမှတ်တရယူလာလို့ရတယ်
🇹🇭 Singha Park 🐘
White Temple ပြီးရင်အနီးဆုံးနေရာက Singha Park ပါ။ လမ်းသင့်တော့ Park ထဲအရင်ဝင်ကြတာပေါ့။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီး Singha Beer မှာပါတဲ့ Logo ရွှေရောင်အရုပ်ကြီးရှိရာနေရာပါ။ မြက်ခင်းပြင်ကြီးပေါ်မှာ ရွှေရောင်အရုပ်ကြီးနဲ့ အရမ်းလှပါတယ်။ ခြံထဲမှာ စိန်ပန်းပင်၊ လင်ဖက်ခင်းတွေ ကော်ဖီဆိုင် မုန့်ဆိုင်တွေရှိပါတယ်။ အရုပ်ကြီးနဲ့ ဓာတ်ဖမ်းလို့ကောင်းတဲ့နေရာလေးပေါ့။ ဝင်ကြေးပေးစရာမလိုပါဘူး။သဒ္ဓါတို့ အဲ့မှာပဲ နေ့လည်စာစားခဲ့ပါတယ်။ ☺️
နေပူတော့ နေကာ post ပဲ ပေးတတ်တယ် 😬
🇹🇭 Blue Temple (Wat Rong Suea Ten) 💙
ဘုရားဖြူပြီးရင် ဘုရားပြာဆိုပြီး နာမည်ကြီးပါတယ်။
White Temple လောက်မကြီးပေမယ့် အပြာရင့်ရောင် ခြယ်မှုန်းထားတဲ့ Blue Temple ရဲ့ အနုပညာလက်ရာတွေကလဲ အံ့မခမ်းပါပဲ။ Temple တိုင်းင အနုစိတ်ပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက် အင်မတန် ခမ်းနားထည်ဝါလှပါတယ်။ အထဲမှာ ထိုင်တော်မူဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်ကြီး တစ်ဆူရှိပါတယ်။ Blue Temple ကလဲ Instagram Spotအနေနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်စရာတေရာကြီးတစ်ခုပေါ့ 🤗
Blue Temple ကြီးပါပေါ့
အထဲက ထိုင်တော်မူ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်
ကွမ်ရင်မယ်တော်ရုပ်ထုဆီသွားဖို့ ကားလေး ချစ်ဖို့ကောင်းချက်
နောက်မှာ ၉ ထပ်ကျောင်းဆောင်
🇹🇭 Wat Huay Pla Kang 🕊
ချင်းရိုင်မြို့ရဲ့ အမြင့်ဆုံး ကွမ်ရင်မယ်တော်ရုပ်တုကြီးရှိရာနေရာပါ။ မယ်တော်ရုပ်နဲ့ ကိုးထပ်ကျောင်းဆောင်ကြီးရှိလို့ နာမည်ကြီးတဲ့ အထင်ကရနေရာကြီးတစ်ခုပါ။ တောင်ကုန်းပေါ်မှာရှိတာဖြစ်လို့ ချင်းရိုင်မြို့ကိုလဲ အပေါ်စီးကနေမြင်ရပါတယ်။ ကွမ်ရင်မယ်တော်အထဲကနေပြီး အပေါ်ဆုံးထိတက်လို့ရပါတယ်။ ဓာတ်လှေကားစီးခ တစ်ယောက်ကို ဘက် ၄၀ပေးရပါတယ်။
အထဲမှာတော့ အဖြူရောင်တစ်မျိူးထဲကိုသာ သုံးထားတဲ့ ကွမ်ရင်မယ်တေယ် အနုပညာလက်ရာတွေကိုတွေ့ရမှာပါ။ အောက်ကိုပြန်ကြည့်ရင်တော့ အသည်းယားစရာကြီးပေါ့ 🤭 တောင်တက် တောင်ဆင်းကိုလဲ ကားနဲ့ အကြိုအပို့ free လုပ်ပေးပါတယ်။ ဘေးမှာတော့ ကိုးထပ်ကျောင်းဆောင်ကြီးရှိပါတယ်။ ကိုးထပ်လုံးကိုတက်လို့ရပါတယ်။
ကွမ်ရင်မယ်တော်ရုပ်ထုကြီး ဟိုး ခေါင်းပေါ်ထိတက်လို့ရတယ်
အယ့်လယ့် နောက်ကျော်တွေကြီး တလိုင်း
ဘေးက နဂါးရုပ်ထုတွေကို show ဘယ်လိုတောင်လက်ရာမြောက်လိုက်လဲ
🇹🇭 Royal Ratchapluke Park
ချင်းရိုင်က ဘုရင်မပန်းခြံဆိုတာ နာမည်ကြီးပါပဲ။ ပန်းခြံထဲလည်ပြီးပတ်မယ်ဆိုရင် တစ်နေကုန်မှာမို့ မသွားဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ရောက်ရင် ဝင်လည်ခဲ့ကြဦးနော် ☺️
ကွမ်ရင်မယ်တော် နဖူးနားမှာ အထဲထဲမှာပေါ့😬
🇹🇭 Choui Fong Tea House 🌱
နောက်ဆုံးမှဝင်ခဲ့တဲ့ သဒ္ဓါ့အကြိူက်ဆုံးနေရာလေးပေါ့။ မျက်စိတစ်ဆုံးလက်ဖက်ခင်းကြီးတွေ လှမှလှပဲ။ 🌱
လက်ဖက်ခင်းမှာ နေရာ ၃ နေရာရှိတယ် ဆိုင်သုံးဆိုင်ပေါ့။ ကြိုက်တဲ့ဆိုင်က ကြိုက်တဲ့ View ကိုကြည့်လိုရတယ်။ Green Tea နဲ့ပတ်သတ်တာ အကုန်ရတယ်။ အဲ့ကိုရောက်ရင်တော့ Green Tea Cake လေးနဲ့ Green Tea လေးသောက်ခဲ့သင့်တယ်။ လက်ဖက်ခင်းတွေကိုပုံတွေမှာသာကြည့်လိုက် ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ကိုမဝဘူးရယ်။
အိုင် သိပ်ကြိူက်တဲ့နေရာလေးပေါ့ အပြင်မှာပိုလှတယ်
အရမ်းကြိုက်တယ် အဲ့နေရာလေးကို ချင်းရိုင်သွားရင်ဝင်ခဲ့ကြနော်
Green tea နဲ့ပတ်သတ်တာတွေ ဝယ်လို့ရတယ်
Street food တွေတန်တယ် ဝအောင်စားခဲ့တယ် 🤭
အရမ်းအသုံးဝင်တဲ့ offline app
🇹🇭 တည်းခိုဖို့ 🏢
တည်းဖို့ဆိုရင်တော့ သဒ္ဓါ့ရဲ့ခရီးသွားဖော် Booking.com ကတော့ မပါမဖြစ်ပါ။ အဲ့မှာပဲ ဈေးသက်သာတာရွေးပြီးတည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၃ ယောက်ခန်းကို ဘက် ၁၀ဝ၀ဝန်းကျင်ပေးရပါတယ်။ Breakfast ပါပါတယ်။ Piyaporn Place Hotel မှာတည်းခဲ့ပါတယ်။ Hotel နားမှာ ညဈေးတန်းလဲရှိတော့စားဖို့အတွက်တော့ အိုကေပဲ။ ရှေ့မှာ Seven eleven လဲရှိတယ်။
တခြားဈေးသက်သာတဲ့ Hotel တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်။ Booking.com ကိုသာ ပြေး Down ထားလိုက်တော့ 😉
ညဈေးတန်းမှာ Street food တွေကလဲအစုံ။ ဗိုက်အရမ်းဆာတယ်နော် ဝင်မစားရဲဘူး ဘာရောင်းမှန်းမသိလို့ 🤣🤣 ပုံလဲမပြထား၊ အင်္ဂလိပ်လိုလဲမရေးထား ဂယက်တွေထပေါ့။ ပုံပြထားတဲ့ဆိုင်ပဲဝင်စားရတယ် 😂😂 ဆာဝါဒီခ နဲ့ ခ့ပလွမ်ခ… အဲ့နှစ်လုံးနဲ့ လုပ်စားလာတယ် 😝
ကဲ အမျိူးတို့ရေ အဲ့လောက်ဆို ချင်းရိုင်ကိုလည်လို့ရပီထင်ပါတယ်။ သွားခဲ့တဲ့ကားတွေ ဖုန်းနံပါတ်တွေသိချင်ရင်လဲ Chat box မှာ သေးစိတ်လာမေးနိုင်ပါတယ်နော်။ ချင်းမိုင်းဆက်ဒိုးချင်လဲရတယ် 🤗
အဆုံးထိဖတ်ပေးလို့ တစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်…….
TDTravelNotes #ChiangRai #Instagramspot #Thailand